Nationell Patientenkät waxa weeye magac iskutag ah oo baadhitaanka qaranka ee soo noqnoqda ee bukaan socodka dareenkooda ku sabsan caafimaadka-iyo daryeelka caafimaadka. Baadhitaanka waxa sameynaysa CMA Research iyadoo qandaraas ka haysata Kamuunada iyo Gobolada Iswiidhan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Waxay bukaan socodku la kulmeen iyo aragtidoona ku sabsan daryeelka ayaa ah il muhiim ah oo si joogto ah loogu horemariyo daryeelka caafimaadka. Iyadoo Nationell Patientenkät la adeegsanaayo ayay bukaansocodku helayaan fursad kaga hadlayaan oo ay ku siinayaan darajo waxay ka kulmeen iyagi iyo dareenkooda. Su´aalahu waxay ku sabsan yihiin sida la kulanka, ka qeyb qaadashada, aaminaada iyo macluumaadka. Natiijada waxa loo isicmaalayaa si loogu horumariyo oo loogu wanaajiyo daryeelka caafimaadka marka laga eego xaga aragtida bukaan socodka, ay noqoto saldhig la iskugu barbardhigo rugaha caafimaadka iyo inay noqoto aalad maamul iyo hogaamin ah.
Sidee baa qoraal-waydiimaha ugu jawaaba?
Hab baqtiyanasiib ku salaysan ayaa lagu soo xushay inaad ka qayb qaadato qoraal-waydiimaha bukaan-socodyada loogu talagalay ee qarmeed. Fursadda waxaa ku lifaaqan warbixin gaar ahaan adiga kugu saabsan iyo sida aad xaalad-baarista ugu qayb qaadan karto. Waxaa imminka is garab socda dhowr xaalad-baarista oo qaabkooda kala duwan.
Haddii lagu siiyaya furaha lagu galo, ka jawaab qoraal-waydiimaha adigoo qora koodkaaga halkaan. Haddii lagu siiyay koodka loo yaqaanno QR-kod ka qaad masawir adigoo adeegsanaayo smartphone-kaaga/padka, kaddib toos ugu jawaab su’aalaha adigoo mobaylkaaga adeegsanaayo. Haddii qoraal-waydiimaha guriga lagugu soo diray ka soo jawaab, kaddib ku soo dir baqshadda tikitka boostada u baahnayn oo ku lifaaqan. Ka jawaab su’aalaha ku saabsan aragtida aad ka qabto, sidaas ayaa ku caawini kartaa sidii goobaha daryeel-caafimaadeedka dalka Iswiidan sare ugu qaadi lahaayeen tayada daryeel-caafimaadeedka.
Miyaa macluumaadkeyga loo maareynayaa si sir ah?
Haa, jawaabahaaga waxa loogu keydinayaa si sir ah. Ma dhici karto in la tixraaco shakhsiga jawaabta diibay si lagu cadeeyo. Natiijada baadhitaanka ayaa lagu soo bandhigi doonaa si macluumaad isku urursan, waxa looga jeedaa tirakoob iyo macluumaad la isku geeyay oo heer guud ah. Foomka su´aalaha baadhitaanka waxa ku jirta qeyb qoraalka xorta, fadlan ha ku qorin wax macluumaad shakhsi ah halkaas.
Sidee ayuu golaha gobalku u maareynayaa natiijada?
Qiyaasta Nationell Patientenkät waa inay ka qeyb qaadato si looga wanaajiyo caafimaadka-iyo daryeelka caafimaadka. Si loo helo aqoon dheerad ah oo sida ay bukaan socodku u dareemayaan xidhiidhka ay daryeelka caafimaadka la sameyanayaan, si loo sameyn karo isbarbardhig qeybaha, wax la iska barto, loo arko isbadel wakhtiga oo loo fahmo kala faraqa u dhaxeeya qeybaha kala duwan iyo kooxaha ayaa saldhig u ah shaqada ka wanaajintaa.
Natiijada waxa lagu salaynayaa rugaha caafimaadka ee ka qeyb qaadanaya iyo qeybta , halkaas oo maamulku uu u isticmaali doono natiijada inay saldhig u noqoto waxqabadka horumarka. Dadweynaha iyo dadka bukaan socodka ee ka soo jawaabay baadhitaanka ayaa iyana sidoo kale natiijada ka heli doona.
Halkee ayaan wixii su´aalo ah weydiinayaa?
Su´aalaha ku sabsan baadhitaanka waxa toos loo weydiinayaa CMA Research iyadoo la isticmaalaayo emaylka: support@patientenkat.se ama telefoonka lacag la´aanta: 08-80 62 02, maalmaha shaqada inta u dhaxaysa 08.00-17.00.
Haddii aanan rabin inaan ka qeyb qaato baadhitaanka?
La soo xidhiidh CMA Research telefoonka lacag la´aanta: 08-80 62 02, maalmaha shaqada inta u dhaxaysa 08.00-17.00.